Gabar da’yar oo deeq waxbarasho ka heshay 19 jaamacadood! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Gabar da’yar oo deeq waxbarasho ka heshay 19 jaamacadood!
Gabar da’yar oo deeq waxbarasho ka heshay 19 jaamacadood!
Posted by: Ahmed Haaddi May 17, 2021
Himilo – Victory Yinka-Banjo waa gabar 17 jir ah oo iskuulkeeda sare ku dhammeysatay dalka Nigeria oo ay u dhalatay kuna noolashay. Waxay ku hammi weyneyd waxbarasho dibadda ah balse qoyskeedu ma aysan awoodin dhaqaalaha ku baxaya.
Iyada oo xasuusan culeyskaas waxay aad ugu dedaashay inay iskeed wax isku barto, taas oo u suura galisay inay kaalmaha hore ka gasho dhowr imtixaan oo ay gashay, sida CIE oo laga qaado dadka luuqada English-ka aysan u aheyn afka koobaad.
Victory hadda waxay ku jirtaa waayo farxadeed, waxaa u baryay waa cusub, hadda waxay ka fekereysaa kala xulashada 19 xarumo waxbarasho ah oo siiyay deeq waxbarasho oo qiimaheedu ka badan 5 milyan oo Doollar.
“Waxaan codsaday iskuullo badan, sababtoo ah maanan ku fekereynin inuu midkoodna I aqbali doono. Victory ayaa sidaas u sheegtay Tv-ga CNN.
Jaamacadaha deeqda waxbarashada buuxda siiyay intooda badan waxay ku yaallaan Mareykanka iyo Canada, waxaana ka mid ah Princeton University, Harvard College, Stanford University, iyo Johns Hopkins University.
Helida jaamacadahan ayaa laga maraa dhib badan maadaama ay yihiin kuwa ugu tayada sarreeya caalamka. Balse Victory waxay hadda ku yabaalsan tahay middii ay dooran lahayd maadaama dhammaantood looga gacan haatinayo.
Xafiisyada jaamacadaha u qaabilsan aqbalaadda iyo diiwaan gelinta waxay sheegeen inay aad ula tacajabeen xogta Victory taas ay sheegtay inay qofka koobaad ka dhigaan mar walba.
“Waxaan wadaa baarid aan ku sameynayo xarumaha qaar, hadda waxaa safka hore iigu jira Stanford, Harvard, MIT, Duke, iyo Johns Hopkins.” CNN ayay sidaas u sheegtay.
Dhallinyada la deggan Lagos iyo guud ahaan Nigeria ayay u noqotay tusaale dhiiri geliya. Hadda wakhtigeeda firaaqada waxay da’yarta raadinaya deeqaha waxbarashada ka caawisaa xareynta xogaha codsiyada.
Previous: Willian oo ay xiiseynayaan kooxo yurub iyo MLS-ka ka dhisan
Next: Maqal- Suwar min xayaati saxaabah- Casharka 82aad